China Crystal Diamond glass glass labozia mangarahara sy mpanamboatra | Honghui Glass
★ habe marani-tsaina, mety amin'ny faritra maro, na haingo na azo ampiharina.
★ vita amin'ny akora fitaratra avo lenta izy io, ary mafy sy malama ny vokatra.
★ Ny tontolon'ny fanapahana geometrika dia manome mangarahara kokoa ny akora fitaratra, toy ny faritry ny diamondra static, mampiditra hazavana sy aloky ny zava-mahamamo.
★ ny tampon'ny refy telo-refy mahazatra dia manohina sy mahaliana amin'ny bika aman'endriny.
✔ ### ### [Haingo sy fanomezana an-trano tonga lafatra]: Ireo mpihazona labozia dia mety indrindra hampisy voninahitra sy tantaram-pitiavana amin'ny latabatra fisakafoana. Efitra fandraisam-bahiny, latabatra ao an-dakozia ary fandravahana latabatra kafe any amin'ny efitrano fandraisam-bahiny, haingon-trano tsara ho an'ny Krismasy, Thanksgiving ary ny firavaka latabatra fety rehetra.
✔ ### ### [Fanomezana kanto sy vaovao ho an'ny fizarana diplaoma] fitsingerenan'ny andro nahaterahana, tsingerintaona, fisaorana, fanomezana ho an'ny fetin'ny mpifankatia, fanomezana ho an'ny Fetin'ny Reny, fanomezana ho an'ny ray, fifankatiavana sy fitiavana, alatsinain'ny cyber & zoma mainty ary fotoana manokana Mametraha jiro dite (tsy omena) ao amin'ny mpihazona tsirairay ary hamoaka ambaratonga amber malefaka izy io ary hamorona atmosfera milamina izay manamaivana ny adin-tsainao ary manatsara ny torimaso
✔ ### ### [VOKATRA]: ny vokatra dia vita amin'ny akora manta misy kalitao kely isaky ny dingana famokarana. Miaraka amin'ny tanjona hahatratrarana dian-tongotra karbaona tsy miandany dia miangavy anao hamerimberina ary ampio hamela an'i Neny Tany tsara kokoa ho an'ny taranaka ho avy.
✔ ### ### [Fiarovana] Fanamarihana: Alohan'ny hamenoana ny vera miaraka amin'ny labozia vaovao, azafady mba diovy tsara izy ireo mba tsy hisian'ny savoka sisa tavela sy / na hisikina ireo labozia teo aloha, izay mametraka loza mitatao ho fiarovana ny biby fiompin'ny ankizy ary tsy ho mora mirehitra akora.
✿ Ny endrika endrika minimalista dia mahatonga ny fiainana ho tsara tarehy kokoa, maivana ary kalitao tsara, vita amin'ny vy miaraka amin'ny sary nohetezana be pitsiny, Mamorona fampisehoana hazavana sy aloka mahavariana.
Design Drafitra maoderina tsotra amin'ny haingon-trano rehetra, tsara ho an'ny efitrano fandraisam-bahiny, faritra fisakafoana, efitrano fandraisam-bahiny, haingon-trano fidiovana sy efitrano fandriana.
✿ Manampia labozia labozia-Ilay labozia maivana doko maivana, mitazona labozia dite savoka na labozia tsy misy dikany. Tonga lafatra ho an'ny hazavana amin'ny efitrano fandraisam-bahiny na efitrano fandraisam-bahiny, izy io koa dia manome fanampin-tsakafo tena tsara amin'ny fanaka hetsika.
Previous: Jiro fitoeran-tavoahangy vita amin'ny rano
Manaraka: Tompon'ny labozia pentagram fitaratra mangarahara
Siny fitoeran-dabozia lehibe
Tompon'ny labozia pentagram fitaratra mangarahara
Kopy labozia lotus fitaratra mangarahara mena
Labozia vera boribory mena mangarahara
Labozia ravina vera mena
Jiro - labozia mangarahara am-bava ...
Kaopy labozia madio mazava 480g